जसपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला केपी ओलीसँग केको लेनदेन छ महत्व ठाकुरको ? यस्ता रहस्यहरु बाहिरिए - OSNepal
जसपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला केपी ओलीसँग केको लेनदेन छ महत्व ठाकुरको ? यस्ता रहस्यहरु बाहिरिए
चैत्र २६, २०७७ बिहिवार ०९:०६ बजे
‘हाम्रो लाइन प्रष्ट छ, जसले माग पूरा गर्छ, त्यसलाई हामीले समर्थन गर्छौ,’ ठाकुरनिकट जसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनिष सुमनले भने, ‘ओली सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्छ भने ओली सरकारलाई हामी समर्थन गर्छौ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गए पछि पार्टीको बैठक बस्न सकेको छैन। चैत ५ गते बोलाइएको कार्यकारिणी समितिको बैठक चैत ५ गते बस्न सकेन। ५ गते बस्न नसकेको बैठक होली पछि बस्ने भनिएको थियो। तर, होली पछि पनि बैठक बस्न सकेन।